ဆောင်းပါး > တရားဒေသနာ > လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာဘာလဲ?
ကျွန်ုပ်တို့သည်လွတ်လပ်မှုနှင့်ပတ်သက်သောတရားဒေသနာအချို့ကိုကြားသိခဲ့ရသည်၊ သို့မဟုတ်ဤအကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်အဘို့, ဒီဖော်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်။ အထူးအရာလွတ်လပ်မှုကိုစွန့်လွှတ်နှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ပုံသည်၎င်းသည်စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ဆန့်ကျင်တွင်လွတ်လပ်မှုမရှိခြင်းသည်စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်တူညီသည်။ အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းအားဖြင့်ပတ် ၀ န်းကျင်မှာအစဉ်လိုက်နေတဲ့အခါငါတို့လွတ်လပ်ခွင့်မှာကန့်သတ်ချုပ်ချယ်မှုခံစားရတယ်
နေ့စဉ်ဘ ၀ မှာဒီလိုမျိုးအသံထွက်တယ် -
“ မင်းထရမယ်၊ ခုနစ်နာရီနီးပြီ!”
"အခုလုပ်ရ ဦး မယ်!"
ဤအတွေးပုံစံကိုဂျူးများနှင့်ယေရှုဆွေးနွေးခြင်းမှအလွန်ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်သည်။ Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus him Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus Jesus him Jesus him him him him him him Jesus him Jesus Jesus him believed him him him him Jesus him Jesus him Jesus \_ t ထိုအခါယေရှုသည်ယုံကြည်သောယုဒလူတို့အားမိန့်တော်မူသည်ကား၊
«Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen.» Da entgegneten sie ihm: «Wir sind Abrahams Nachkommenschaft und haben noch niemals jemandem als Knechte gedient; wie kannst du da sagen: Ihr werdet frei werden? Jesus antwortete ihnen: «Wahrlich, wahrlich ich sage euch: ein jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Hause, der Sohn dagegen bleibt für immer darin. Wenn also der Sohn euch frei gemacht hat, dann werdet ihr wirklich frei sein" (Johannes 8,31-၃။ ၄)။
ယေရှုကလွတ်လပ်မှုအကြောင်းစတင်ပြောဆိုသောအခါပရိသတ်သည်ကျွန်တစ် ဦး သို့မဟုတ်ကျွန်တစ် ဦး ၏အခြေအနေကိုချက်ချင်းဆွဲတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တစ် ဦး သည်လွတ်လပ်စွာဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ သူကအများကြီးမပါဘဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်, သူကအရမ်းကန့်သတ်သည်။ သို့သော်ယေရှုသည်နားထောင်နေသူများအားသူတို့၏လွတ်လပ်မှုပုံသဏ္ဌာန်မှဝေးကွာစေသည်။ ဂျူးလူမျိုးများကသူတို့သည်လွတ်လပ်မှုအမြဲရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ယေရှုလက်ထက်၌သူတို့သည်ရောမတို့၏နယ်မြေဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ ထိုမတိုင်မီကျွန်ဘဝ၌ပင်ရှိခဲ့သည်။
လွတ်မြောက်ခြင်းအားဖြင့်သခင်ယေရှုနားလည်သောအရာသည်ပရိသတ်နားလည်ထားသည့်အရာနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားပါသည်။ ကျွန်ပြုခြင်းသည်အပြစ်နှင့်တူညီသည်။ ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူမူကား၊ လွတ်လပ်စွာနေလိုသူသည်အပြစ်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးမှလွတ်မြောက်ရမည်။ ဤလမ်းကြောင်း၌လွတ်လပ်မှုကိုယေရှုမြင်သည်။ လွတ်လပ်ခြင်းဆိုတာယေရှုဆီကလာတာ၊ သူလုပ်နိုင်တာ၊ သူကြားဝင်ဖြန်ဖြေတာ၊ ထို့နောက်နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်လွတ်လပ်ခြင်းကိုပြသခြင်း ဖြစ်၍ သူသည်လုံးဝလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကိုယ့်ကိုကိုယ်လွတ်လပ်ခြင်းမဟုတ်လျှင်လွတ်လပ်မှုကိုမပေးနိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှု၏သဘောသဘာဝကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနားလည်ပါကလွတ်လပ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုနားလည်လာမည်။ သခင်ယေရှု၏အခြေခံသဘောသဘာဝသည်အဘယ်နည်းနှင့်ထင်ရှားသည်ဟူသောထင်ရှားသောကျမ်းပိုဒ်တစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့အားဖော်ပြသည်။
"Solche Gesinnung wohne in euch allen, wie sie auch in Christus Jesus vorhanden war; denn obgleich er Gottes Gestalt (göttliche Wesensgestalt oder Wesensart) besass, sah er doch das Gleichsein mit Gott nicht als einen gewaltsam festzuhaltenden Raub (unveräusserlicher, kostbarer Besitz) an; nein er entäusserte sich selbst (seiner Herrlichkeit), indem er Knechtsgestalt annahm, ganz in menschliches Wesen einging und in seiner leiblichen Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde" (Pilipper 2,5-၃။ ၄)။
သခင်ယေရှု၏ထူးခြားသောလက္ခဏာမှာသူ၏မြင့်မြတ်သောအဆင့်အတန်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်း ဖြစ်၍ သူသည်မိမိ၏ဘုန်းအသရေကို“ စွန့်လွှတ်” ။ ဤအာဏာနှင့်ဂုဏ်အသရေကိုစိတ်လိုကိုယ်လျောက်စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ သူသည်ဤအဖိုးထိုက်သောပိုင်ဆိုင်မှုကိုစွန့်လွှတ်လိုက်ပြီ ဖြစ်၍ ၎င်းသည်သူအားကယ်တင်ရှင်၊ လွှတ်ပေးသူ၊ လွတ်မြောက်စေသူ၊ လွတ်လပ်မှုကိုပြုလုပ်သူ၊ သူတစ်ပါးအားလွတ်လပ်မှုကိုကူညီရန်သူဖြစ်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မီစေသည်။ ဤအခွင့်ထူးကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်လွတ်လပ်မှုအတွက်အလွန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်သည်။ ငါသည်ဤအချက်ကိုသို့ပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးခဲ့ရသည်။ ပေါလုဆီကဥပမာနှစ်ခုကကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။
"Wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, dass aber nur einer den Siegespreis erhält? Lauft ihr nun in der Weise, dass ihr ihn erlangt! Jeder aber, der sich am Wettkampf beteiligen will, legt sich Enthaltsamkeit in allen Beziehungen auf, jene, um einen vergänglichen Kranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen" (1. ကောရိန္သု 9,24-၃။ ၄)။
ပေါလုသည်လွတ်လပ်သောလူသားတစ် ဦး အနေနှင့်ဤတွင်မဖြစ်မနေလုပ်ရမည့်အရာဖြစ်သည်ဟုသူပြောခဲ့သည်။ ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ သူကလွတ်လပ်မှု၏နိယာမကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ပြီလော ငါထင်တာကသူဟာသူ့ပုံသက်သေကနေကျွန်မတို့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပိုနီးစေချင်တယ်လို့ထင်တယ်။ ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်:
"Denn nur, wenn ich dies aus freiem Entschluss tue, habe ich (Anspruch auf) Lohn; wenn ich es aber unfreiwillig tue, so ist es nur ein Haushalteramt, mit dem ich betraut bin. Worin besteht demnach mein Lohn? Darin, dass ich als Verkündiger der Heilsbotschaft diese unentgeltlich darbiete, so dass ich von meinem Recht bei der Verkündigung der Heilsbotschaft keinen Gebrauch mache. Denn obwohl ich von allen Menschen unabhängig (frei) bin, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um die Mehrzahl von ihnen zu gewinnen. Alles das aber tue ich um der Heilbotschaft willen, damit auch ich Anteil an ihr erlange" (1. ကောရိန္သု 9,17–19 u. 23).
ပေါလုသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှတာ ၀ န်တစ်ခုကိုခံယူခဲ့ပြီးသူသည်ဘုရားသခင်အနေဖြင့်တာ ၀ န်ရှိကြောင်းသူကောင်းစွာသိသည်။ သူကလုပ်ခဲ့ရတယ်၊ ဒီကိစ္စကိုခိုးမခိုးနိုင်ဘူး။ ဒီအလုပ်မှာသူဟာလုပ်အားခနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုချက်မရှိဘဲဘဏ္himselfာစိုးတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတစ်ယောက်အဖြစ်သူ့ကိုယ်သူမြင်ခဲ့တယ်။ သို့သော်ဤအခြေအနေမျိုးတွင်ပေါလုသည်လွတ်လပ်သောနေရာရရှိခဲ့သည်။ သူကသူ့အလုပ်အတွက်လျော်ကြေးကိုမဆို။ လူတိုင်းအတွက်ကျွန်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ သူကအခြေအနေများနှင့်အဆင်ပြေအောင်; whomဝံဂေလိတရားကိုဟောသောလူများတို့အား၊ လျော်ကြေးကိုအထက်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းအားဖြင့်သူသည်များစွာသောလူတို့ထံရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူ၏သတင်းစကားကိုကြားသောသူများသည်သတင်းစကားသည်သူ့ဟာသူအဆုံးမဟုတ်ဘဲ၊ ကြွယ်ဝမှုနှင့်လှည့်စားမှုမဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာသိမြင်ခဲ့သည်။ အပြင်ပန်းမှမြင်ရသောပေါလုသည်အမြဲတစေဖိအားပေးမှုနှင့်တာဝန်ရှိသူတစ် ဦး နှင့်တူသည်။ သို့သော်ပေါလု၏အတွင်း၌ချည်နှောင်ခြင်းမရှိ၊ လွတ်လပ်သည်၊ လွတ်လပ်သည်။ ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အတူတကွဖတ်ရှုခဲ့သည့်ပထမဆုံးကျမ်းချက်ကိုခဏပြန်သွားကြစို့။
"Jesus antwortete ihnen: «Wahrlich, wahrlich ich sage euch: ein jeder, der Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Der Knecht aber bleibt nicht für immer im Hause, der Sohn dagegen bleibt für immer darin" (Johannes 8,34-35) ။
Was meinte Jesus hier mit «Haus»? Was bedeutet für ihn ein Haus? Ein Haus vermittelt Geborgenheit. Denken wir doch an die Aussage Jesu, dass in seines Vaters Haus viele Wohnungen bereitet werden für die Kinder Gottes. (Johannes 14) Paulus wusste, dass er ein Kind Gottes war, er war nicht mehr Knecht der Sünde. In dieser Stellung war er geborgen (versiegelt?) Sein Verzicht auf Entschädigung für seine Aufgabe brachte ihn viel näher zu Gott und die Geborgenheit, die nur Gott vermitteln kann. Paulus hat sich für diese Freiheit stark eingesetzt. Das Verzichten auf ein Vorrecht war für Paulus wichtig, denn so gewann er göttliche Freiheit, die sich in der Geborgenheit bei Gott zeigte. In seinem irdischen Leben hat Paulus diese Geborgenheit erfahren und dafür Gott immer wieder gedankt und in seinen Briefen mit den Worten "ခရစ်တော်၌" ထောက်ပြသည်။ သခင်ယေရှုသည်မိမိ၏မြင့်မြတ်သောအဆင့်အတန်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်ဘုရားသခင့်လွတ်လပ်မှုသည်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းနက်နက်နဲနဲသိသည်။
ဤအချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ပို၍ ရှင်းလင်းစွာနားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ ယေရှု၊ တမန်တော်များနှင့်အစောပိုင်းခရစ်ယာန်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပုံသက်သေချမှတ်ခဲ့သည်။ သူတို့၏စွန့်လွှတ်မှုသည်ကြီးမားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုသင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်။ လူများစွာသည်သူတို့ကိုသူတစ်ပါးအပေါ်ထားရှိသောမေတ္တာကြောင့်စွန့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်စိတ်ထိမိကြသည်။ ပေါလုပြောသောစကားကိုလူများတို့သည်ကြားရကြ၏။
"...dass auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird zur (Teilnahme an der) Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt harrt. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir doch den Geist als Erstlingsgabe bereits besitzen, seufzen gleichfalls in unserem Innern beim Warten auf (das Offenbarwerden) der Sohnschaft, nämlich auf die Erlösung unseres Lebens" (Römer 8,21-23) ။
ဘုရားသခင်သည်သူ၏သားသမီးများကိုဤလွတ်လပ်ခွင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင့်သားသမီးများရရှိသည့်အထူးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင့်ကလေးများသည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်လက်ခံခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ပေးသောလုံခြုံရေး၊ အကယ်၍ လူတစ် ဦး သည်ဤလုံခြုံရေးကင်းမဲ့လျှင်လွတ်မြောက်မှုအဖြစ်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်သည့်လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေသည်။ သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးလို။ ထိုလွတ်လပ်မှုကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဘယ်လောက်ဘေးဆိုးမှမွေးဖွားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်မှုကိုနားလည်မှုလွဲခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့်ဆင်းရဲဒုက္ခများ၊
"Traget wie neugeborene Kinder Verlangen nach der vernünftigen, unverfälschten Milch (wir könnten diese Milch Freiheit nennen) damit ihr durch sie zur Seligkeit heranwachset, wenn ihr anders empfunden habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm tretet herzu, dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, vor Gott aber auserwählt, kostbar ist, und lasset euch auch selbst wie lebendige Steine aufbauen als ein geistliches Haus (wo diese Geborgenheit zum tragen kommt), zu einer heiligen Priesterschaft, um geistliche Opfer darzubringen (das wäre der Verzicht), die Gott angenehm sind durch Jesus Christus!" (1. ဓာတ်ဆီ 2,2-၃။ ၄)။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဤတရားဒေသနာအတွက်လှုံ့ဆော်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့်ဆောင်းပါးမှဝါကျနှစ်ခုကိုကိုးကားဖော်ပြလိုသည် -“ လွတ်လပ်မှုသည်အကန့်အသတ်မရှိခြင်းမဟုတ်ဘဲအိမ်နီးချင်းကိုမချစ်ဘဲလုပ်နိုင်စွမ်းရည်။ လွတ်လပ်မှုကိုအတင်းအကျပ်မရှိခြင်းဟုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုသူမည်သူမဆိုသည်လူတို့အားလုံခြုံရေးနှင့်စိတ်ပျက်ဖွယ်အစီအစဉ်များကိုမကျရောက်စေရန်ကာကွယ်ပေးသည်။
Hannes Zaugg ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်